I-Chinese State Media Report: Ama-Cryptocurrensets Awona Amafa Asebenza Kakhulu Ka-2020 | ICoinGenius Host Host Virtual Crypto Umcimbi
I-Chinese State Media Report: Ama-Cryptocurrensets Awona Amafa Asebenza Kakhulu Ka-2020
Yize iChina isabeka iBitcoin namanye ama-cryptocurrensets njengokungekho emthethweni, imithombo yezindaba engaphansi kukahulumeni ethile yaveza imibiko ebachaza njengezimpahla ezisebenza kahle kakhulu selokhu kuqale unyaka.
I-Bitcoin ne-Crypto Run On Chinese Media
Abezindaba abadumile bakahulumeni ngaphansi kwegama iXinhua News Agency setha ithoni izolo ngokucaphuna iBloomberg umbiko enesihloko esithi "i-crypto ishaya igolide njengempahla ephezulu ka-2020 kuze kube manje." Ngaphandle kokufingqa ukulandisa kukaBloomberg, uXinhua wengeze ngokuthi ama-cryptocurrensets "amathuluzi ezezimali asezingeni eliphansi" futhi waphetha ngokuthi babe "isigaba sezimpahla esisebenza kahle kakhulu kulo nyaka."
Enye impahla yedijithali Ukuhlanganisa kulandelwe namuhla kuChina Central Television (CCTV) - phakathi kwezinsizakalo ezithandwa kakhulu ekusakazeni esizweni. Kwisiqeshana sevidiyo esinemizuzu emithathu ubude, i-CCTV ikhulume ngama-cryptocurrensets futhi yagcizelela ekusebenzeni kwawo konyaka. Ngokuqondile, isiqeshana sigxile ekunyuseni kwabo kwentengo kwama-70% kulo nyaka.
Ngokusho kumhlaziyi odumile we-cryptocurrency uDovey Wan, le "propaganda ethokozisayo" isabalale phakathi kwezinye izindawo, ivezwe kuzo zonke "izindlela, amaphephandaba, imidiya eku-inthanethi naku-TV." Ukulandisa okukhangisiwe bekufana - ukuthi izimpahla zedijithali bezikade zidlula zonke ezinye izinsimbi zokutshala imali.
Isikhulu esiphezulu seBinance Changpeng Zhao Ubeke amazwana ukuthi abantu kungenzeka bangakuqondi ukubaluleka kwalokhu kufakwa, kepha "kukhulu."
I-CZ, umphathi we-Binance
Kodwa-ke, uWan uphakamise umbuzo onamandla - iyini inhloso yangempela yalokhu kuthutha? Ngemuva kwakho konke, ama-cryptocurrensets ahlala evinjelwe ukusetshenziswa okusemthethweni ezweni elinabantu abaningi emhlabeni. Uqagele ukuthi lokhu kumboza kungahle kube nokuthintana nemali yedijithali yasebhange laseChina okubikwa ukuthi ikhona ihlolwe.
I-China Behind The Pump Pump?
Njengo-CryptoPotato kubika ekuqaleni kwanamuhla, okuluhlaza kubuse inkambu ye-cryptocurrency ngenani eliphelele lemakethe lenyuka cishe ngama- $ 20 billion kusukela izolo.
Ngokomlando, izindaba nezimemezelo ezivela eChina ngokungangabazeki zithinte amanani. Njengoba kunje, ngeke kusimangaze ukuthi ukusakazwa kwabezindaba kwezinsuku ezimbili okukhuthaza ama-cryptocurrensets njengezimpahla ezisebenza kahle kakhulu ngo-2020 kuthinte imakethe ngezinga elithile.
Ekupheleni konyaka we-2019, uMongameli u-Xi Jinping unxuse izwe ukuthi lisheshise ukwamukelwa kwalo kwe-blockchain. Emahoreni ambalwa alandelayo, inkambu ye-cryptocurrency ithole okunye kokuhlaba umxhwele kakhulu amaphampu entengo emlandweni. I-Bitcoin iyodwa inyuke ngo-42% ngamahora.
Kungakapheli nenyanga, izikhulu zezwe zakucacisa ukuthi ukuba yi-pro-blockchain akusho ukuthi kunesimo esihle kuma-cryptocurrensets. Ngemuva kokuqinisekisa ukuthi izimpahla zedijithali zisengavumelekile, inani lazo wehla ukuphendula.
Izihloko ezihlobene:20192020zokutholwaizimpahlaibhangebestBitcoinI-BitmexblockchainBloombergibhange eliphakathiimali esebhange ephakathi yedijithaliCeochangpeng zhaoChinaChinesecryptoAma-cryptocurrenciescryptocurrencylwemalidigitalImpahla YedijithaliIzimpahla Zedijithaliimali yedijithaliUDovey WanOkukhethekileOkufakiweIzimaliBAMBILIzezimaliikusasaGoldUmlandoInvestmentMarketikhabethe lemaketheMediaIzindabaAbantuukusebenzaInaniamananiImibikoImisebenzishareUxhasiwetopUkuhwebaUSDTIvidiyo
I-Blockstream's Bitcoin Satode Node Yethulwa eVenezuela
43 amaminithi adlule